The Ab Presents Nepal » प्रकाशलाई जेल हाल्ने रे !
काठमाडौं -: पछिल्लो समय दुई चर्चित गायक शम्भु राई र प्रकाश सपूत चर्चामा छन् ।
पछिल्लो समय दर्शक श्रोताका मन मुटुमा बस्न सफल गायक सपूतलाई आफ्नो नयाँ गीत ‘गलबन्दी’ ले त चर्चामा ल्यायो नै । साथै उनको उक्त गीतमा ‘चोरी’ को पनि ट्याग लगाइयो ।
शम्भु राईको धेरै पुरानो देउसी गीत ‘आउ नाचौँ’ सँग मिलेको भनेर धेरैले दाबी पनि गरे । स्वयम् शम्भु राईले पनि आफ्नो गीतसँग मिलेको दाबी गरी उक्त गीतमा आफ्नो नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला प्रकाश सपूतले सामाजिक सञ्जालमा आफूले गीत नचोरेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले उक्त आरोपबाट आफूले आफैँलाई अपराधि महशुस गरेको बताएका छन् ।
‘कस्तो डर लागेको छ । समाचारहरु कति धेरै आएको । छिटो आउनु न काठमाडौं । – बिन्दुले आफ्नो आँशु लुकाउन खोजे पनि मैँले थाहा पाएँ कि उ रोईरहेकि छ । ममिलाई कस्ले हो भन्दिएछ– प्रकाशलाई जेल हाल्ने रे ! भाईहरुलाई रुँदै फ़ोन गर्नुभएछ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘मलाई असाध्य माया गर्ने यि दुई निर्दोष महिलाको आशुले मलाई नराम्ररि हिर्कायो । मैले आफुले आफुलाई ठुलो अपराधि महशुस गरेँ। के मैँले आफ्नो ईमान गुमाएकै हो त ? भन्ने जस्ता सयौँ प्रश्नहरु असिना बर्सिए जसरी बर्सिए । म मकैको बोट जस्तै छिया छिया भएँ ।’
गायक सपूतले शम्भु राईलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । उनले शम्भु राईका कारण आफ्नो आत्मविश्वास झन् बढेको बताए । उनले लेखेका छन्, ‘धन्यवाद शम्भु सर, मँले यसपाली मेरो वरिपरि रहेका धेरै मानिसहरुलाई गहिरो गरि चिन्न पाएँ । यो खबरहरुले उनिहरुको जिवनमा यत्तिकै मुस्कुराहट थपियो मानौँ यसपालि दशैँमा डबल बोनस आउँदैछ जस्तो । यसले मेरो आत्मविश्वास बढेको पनि छ । खासमा भन्ने हो भने मलाई तपाईंसँग भन्दा ति मानिसहरुसँग बढि डर लाग्न थालेको छ । म सँग कुनै विचार, कुटनिति र पहुँच छैन सर । भए पनि यहाँ प्रयोग गर्दिन । तपाईँ मलाई सजिलैसँग जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ । प्रेम, प्रोत्साहन, कारवाही या निरुत्साहित ?’ source makalukhabar